Xasan Sheekh: "Guddiga Doorashada waxay Farmaajo u raadinayaan muddo kororsi uu isagu sheegan waayey" | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay qaraarkii Golaha Shacabka ee 13 xubnood loogu ansixiyey inay ku yeeshaan Aqalka Sare ee dalka iyo Hadalkii lasoo yeeray Guddiga Doorashada Qaranka isagoo baaq u diray Madaxweyne Farmaajo.
Isagoo shir jaraa’id ku qabtay ayuu ku caddeeyay inuu soo dhoweynayo go’aanka Golaha Shacabka, isla markaana ay tahay arrin weyn oo taariikhi ah in Gobolka Banaadir uu metalaad siyaasadeed yeesho, isagoo intaas raaciyey inaysan arrintu dhammaan oo loo baahan yahay in Gobolka Banaadir uu helo maamul ay soo dhisteen oo iyagu doorteen.
“Baahida ugu weyn oo dadka Banaadir ay qabaan waa inay dhistaan maamul ay soo doortaan, ayna uga mid noqdaan Federaalka Soomaaliya ee Dastuurku tilmaamayo..” ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud isagoo caddeeyay inaan dadka Gobolka Banaadir laga sii jeedin dowlad dhisidda ay garab taagnaayeen ilaa sanadkii 2000.
Hoggaanka dalka ayuu sheegay inuu bareer ah u diiday nidaamka federaalka ee Soomaaliya ku heshiisay iyadoo la hayo caddeyn, wuxuu kaloo sheegay in madaxweyne Farmaajo uu diidan yahay qabashada Doorasho raali laga wada yahay oo ay isla ogolaadaan dowladda, Maamul Goboleedyada iyo saamileyda siyaasadda.
Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu kaloo ka hadlay arrinta Guddiga Doorashooyinka iyo muddo kordhinta ay soo jeediyeen Guddiga ay hoggaamiso xaliimo yarey, isagoo sheegay inaan la fileyn waxa ay dadka la hor yimaadeen.
“Hadalkii Xaliimo Yarey waxay noqotay wax aad looga fajacay, mana ahayn waxa laga sugayay, lagama sugeyn muddo kordhin iyo abuurid mugdi siyaasadeed oo hor leh.. Muddo ka badan saddex sano guddiga waxay noo sheegayeen inay Doorasho diyaar ka tahay dhinacooda.. Hase yeeshee hadalkooda waxa soo baxday inay umadda Soomaaliyeed u hoosaasiyeen oo waqti ay Xeero iyo Fandhaal kala dhaceen soo bandhigeen inay ruux dheereysi u sameynayaan hoggaan muddo 4 sano ah wax ka qaban waayey Doorashada dalka oo xoog iyo hanti ku bixiyey burburinta nidaamka federaalka, waxaana hadalkooda laga dheehan karaa muddo kordhin riman muddo kordhin kale..” ayuu yiri Madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud.
Wuxuu intaas ku darray in Madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaaraha (xukuumadiisa) muddo dheer ku faanayeen inay wada joogeen, iyadoo halheyskoodu ahaa ‘waan isla joognay’. laakiin aanu maalin ka mida xilligaas madaxweynaha ka hadlin Doorasho iyo sida loo qabanayo.
Xasan Sheekh wuxuu Guddiga Doorashada ku eedeeyay in Madaxweyne Farmaajo ay afkiisa af aan ahayn ugu dalbayaan Muddo kororsi uu isagu dadka la hor imaan waayey; wuxuuna ugu baaqay Madaxweyne Farmaajo inuu u dhaqaaqo sidii loo qaban lahaa doorasho la isla ogol yahay, si ay u suuragasho in qaab nabad ah xukunka loogu kala wareego.
HOOS KA AKHRISO QORAALKA XASAN SHEEKH
Hadaljeedin ku Aaaddan Arrimihii Golaha Shacabka ka dhacay 27.6.2020
Waxaan marka hore hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee u dabbaaldageysa usbuuca xorriyadda Soomaaliyeed.
Sida maalinta xorriyadda ee gobollada waqooyi iyo walaalaheen reer Jabuuti iyo munaasabadda soo socota ee 1da Luulyo ee lixdanguuradii ee xorriyadda iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliya.Shalay oo ay taariikhda ahayd 27kii June, 2020, golaha shacabka ee baarlammaanka federaalka Soomaaliya (BFS), waxaa ka dhacay laba arrimood oo kala ah:
Matalaadda Gobolka BenaadirUsbuucii la soo dhaafay golaha shacabka waxaa la horkeenay mooshin lagu soo bandhigay Matalaadda Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare.
Dadaal dheer ka dib maanta waxaa la ansaxiyay 13 xubood oo mustaqbalka ku matali doonto Benaadir aqalka sare ee baarlammaanka.
Waxaa bogaadin usoo jeedinayaa senetarrada aqalka sare ee ku soo daray arrinta Benaadir sharciga doorashooyinka iyo xildhibaannadii golaha shacabka ee u guntaday meel marinta arrinkaas.
Waxaan leeyahay dhammaan mahadi ha idinka gaarto, abaalka dadaalkoodane yaan la isku dayin in qolo kale ay dafto.Hase yeeshe, waxaan rabaa inaan wax yar iftiimiyo waxa dhimman ee inaan u sii wada istaagno ay tahay.
Sida ku cad dastuurka KMG ah ee JFS, aqalka sare wuxuu matalaa danaha Dowladgoboleedyad. Sida aan wada ognahayne Benaadir wali uma sammeysna dowladgoboleed ama maamul ay soo dhisteen dadkiisa si waafaqsan nidaamka federaalka.
Sidaas daraadeed, baahida dhabta ah ee gobolka Banadir waa inuu helaa maamul ay soo dhisteen dadka tirada badan ee deggan gobolka si matalaadda aqalka sare ay dhab u noqoto, dadka reer benaadirne ay ugu hoos noolaadaan hoggaan ay raalli ahaanshahooda ku soo dhisteen ayna uga mid noqdaan nidaamka iyo saabaanka federaalka ee uu dastuurka KMG xeeriyay.
Doorashooyinka qaranWaxaa la jooga waqtigii ay dhici lahayd doorashada qaran ee xilli-xileedka hay’adaha dastuuriga ah ee heer federaal.
Shalay oo taariikhdu ahayd bisha Juun 27, 2020 waxaa golaha shacabka hadal jeedin ka sammeeyay guddoomiyaha Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka (GMDQ), Marwo Xaliima Ismaaciil Ibraahim.
Hadaljeedinta guddiga oo muddo laga wardhowrayay waxay noqotay mid aad looga fajacay oo dadka Soomaaliyeed ka yiraahdeen “TANI TAAN U DHIGANNAYBA MA AHA” li’ anna lagama sugeynin muddo kordhin iyo abuurid mugdi siyaasadeed oo hor leh.
Muddo saddex sano ka badan guddiga waxay noo sheegayeen iney doorashada diyaar ka tahay dhankooda. Hase yeeshe, hadal jeedinta guddiga waxaa ka soo baxday iney ummadda Soomaaliyeed u hoosaasiyeen oo waqti xeero faldhaan kala dhaceen ay ummadda usoo dhigeen iney ruux dheereysi u sammeeyaan hoggaan muddo ku dhaw AFAR SANO wax ka qaba waayay doorashada dalka isla markaana xoog iyo xoolo fara badan ku bixiyay burburinta nidaamka federalka ee dalku doortay.
Sidoo kale hadaljeedinta guddiga waxaa laga dhadhansa kara muddo kordhin rimman muddo kordhin kale sababaha aan soo sheegi doono awgood.
1. Madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waxay muddo dheer ku faanayeen iney wada joogeen muddo ku dhaw AFAR sano. Hase yeeshee maalin ka mid ah muddadaas madaxweynuhu kama hadlin wax doorasho la yiraa.
Haddaba, ninkii doorasho laga sugayay ee aan ka hadlin muddadaas dheer sow shalay afkiisa af aan ahayn looguma hadlin? oo GMDQ nama dhihin Madaxweynaha iyo dhammaan hay’adaha dastuuriga ah (Madaxweynaha, 2da aqal ee baarlammaanka iyo guddoonkooda, afar sano howl doorasho maalinne ma soo hadal qaadin laakin doorasho wey qaba karaan haddii loo kordhiyo muddo xiloodkood ku dhawaad SANNAD amd ka badan. Arrinkaasi “WAA KAAF IYO KALA DHEERI”!
Walaalayaal, doorashadii ugu dambeysay ee dimoqraadiga ahayd ee dalkaan ka dhacday oo ay ka soo wareegtay in ka badan 50 sano, qaladaad ka dhacay awgeed, waxay dalkaan iyo dadkiisa u keentay ma hadho siyaasadeed oo ilaa hadda taagan.
Sidaas daraadeed, Soomaaliya ma xammili karto qalad kale oo taariikhi ah oo dhaca xilli ay ka soo bogsaneyso jahawareer muddo dheer ay la soo tacaaleysay. Sidaas daraadeed, qofka ama kooxda maanta diiddan wadatashi siyaasadeed oo la gaarayo heshiis siyaasadeed oo wada-oggol ah waa QARAN DUMIS IYO DOWLAD DIID, ha ku soo gabbado GMDQ ama ha soo mare jid kale e. Waxaan madaxweynaha JFS ugu duceynayaa in Ilaahey tubta toosan iyo talada toosan waafajiyo
والله وليّ الصالحين
Previous articleCumar Filish: “Muqdisho waa magaalada kaliya ee Shanta Soomaali aysan ku dareemin in laga leeyahay”
Next articleQ/Midoobay, Ingiriiska & Midowga Yurub oo soo dhoweeyay Khudbadii Xaliimo Yarey iyo Shuruud lagu xiray..